Kugadzirisa zvakakwana kugadzirisa uye kuenderera mberi nekushandura kubva kuchikoro chechikoro kuchikoro
Kuchinja kubva kuchikoro chechikoro kuchikoro
Kukurudzira pasina kukanganisa - tora mwana wako akajaira kune chikwereti asati atanga chikoro
Nguva yokutanga kuchikoro - iva nechokwadi chokuti une zororo rakakwana
Pazera remakore matanhatu, kuipa kwehupenyu kunotanga: vana vaishandiswa kunzwa mazwi aya kana mamwe akafanana mumazuva ekutanga apo kunyora kwaive kuswedera.
Kubva kuchikoro chekuchikoro kusvika kuchikoro - kushanduka kwakanyatsobudirira kunobudirira
Mumakore achangobva kupfuura, zvidzidzo zvekuchikoro chepuraimari zvakashanduka kazhinji uye vadzidzisi vakazvitsaurira iye zvino vari kuedza kuita kuti zvive nyore kuti vana vatange chikoro nekubatanidza zvinhu zvakawanda zvinotamba mukirasi uye nemaune kuderedza kutya. Iyo kubatana pakati pe kindergarten uye chikoro chesekondari chave chichivandudzika munzvimbo dzakawanda.
Kunyange zvakadaro, vana vepachikoro vese vanofunga zvinopfuura mufaro kana vachifunga nezvemaitiro avo matsva sevana vechikoro. Mushure mezvose, chirongwa ichi chitsva chehupenyu chinounza nezvimwe zvizhinji zvinokosha kuchinja uye, pamusoro pezvose, mabasa.
Pamwe chete nevadzidzisi, semubereki iwe unofanira kuedza kuita shanduko pakati pevana vekuchikoro uye chikoro sechinyoro chepamusoro uye kugadzirira mwana wako zvakanaka pamatambudziko matsva.
Kusiyana kukuru pakati pekuchikoro chikoro nekusimudzira nzira yekudzidza kuchikoro ndeyekuti mwana kuchikoro kamwe kamwe ane mabasa akawanda. Ichangobva kukwanisa kutamba, kuseka uye kupembera zuva rose uye kamwe kamwe 45 inofanira kunge iri pfoni kwemaminetsi mashomanana panguva, nguva dzose kuchengetedza mabhuku ayo akagadzirira, kuita basa remusha uye kunyora tsamba dzakachena.
Izvi zvinoshamisika kune vazhinji vanowanzo. Saka, zvinonzwisisika kuvara vana vasati vanyoresa mune zvikwereti. Izvi hazvirevi kuti vana vaduku vanofanira kuita chero kunyora kana kuverenga maitiro zuva nezuva. Pane dzimwe mikana.
Kutanga kwechikoro sekutangira hupenyu hwechikoro
Somuenzaniso, kana mwana wenyu achida kuenda kune rimwe gymnastics club kana musiki wechikoro, ivo vanofanira kutanga vatora chikamu muchidzidzo chisina kusunga chidzidzo. Zvadaro zvinogona kuzvisarudzira pachako kana imwe chikamu ichikodzera kana kwete. Asi: Kana mwana wako asarudza, inofanira kuramba yakadaro - kunyanya kana mari yegore negore yave yatobhadharwa.
Kunyangwe muupenyu hwezuva nezuva pane mamiriro mumhuri imwe neimwe apo wechikoro anokwanisa kutora mamwe mabasa. Somuenzaniso, ipa mwanasikana wako kana mwanakomana basa rokutakura marara pasi, kuenda kubheka, kana kuisa tafura nguva dzose. Izvi zvinouraya shiri dzakawanda nedombo rimwechete, nokuti mwana wako haasi kungoita chete pfungwa yekumanikidzwa asiwo anofunga kuti anotorwa zvakanyanya. Mukuwedzera, kuzvivimba kwake kunosimbiswa.
Mukuwedzera, nguva dzose kurudzira mwana wako kufunga, kutarisa uye kuteerera. Chii chakaitwa nevadzidzisi pamusoro perwendo? Ndezvipi zvipfeko zvinotarisirwa kuti zviitwe munguva yechando? Ndezvipi zvingasarudzwa nemwana wako kuti agadzirise nharo pakati pemafaro maviri akaisvonaka?
Nokuita kudaro, iwewo unokurudzira kukwanisa kuisa pfungwa uye kufunga mune nzira yekugadzirisa nzira. Aya mazano maviri anonyanya kudiwa nevadzidzi, sezvo izvi zvinoita kuti nzira dzekudzidza dzive nyore.
Uyewo zvinokosha: Rega mwana wako aedze zvakanyanya sezvinobvira uye anokurudzira kuzvimirira. Somuenzaniso, kana zvichiuya kuchikoro, inofanira kukwanisa kupfeka yoga, kuronga pachayo, uye kutarisira zvinhu zvayo zvega.
Kunyanya mavhiki ekutanga sevana vechikoro vari kunyanya kunetsa vana. Haisi iwe chete unofanirwa kuidzidzira kudzidza, iwe unofanirwa kuwana nzira yako nechekuvaka chivako chisingazikamwi, tenzi nzira yekuenda kuchikoro uye utore nzvimbo yako mukati mekirasi yekirasi. Basa rechikoro nderemasikati.
Kutanga kwechikoro kunofanira kuendeswa nevabereki
Munguva ino, saamai kana baba, munofanira kuve nechokwadi chokuti mwana wenyu anowana kurara kwakakwana uye ane nguva yekudzoka masikati. V
Edza kuchengeta nhamba yekusarudzwa kwemasikati zvakaderera sezvinobvira kuitira kuti mwanakomana wako kana mwanasikana wako asangane neshamwari kana kugara muimba yavo.
Usaisa kumanikidzwa kumwana wako kana zvakaoma kuwana zvidzidzo zvekudzidzisa. Vazhinji vekutanga vatengesi vanorwisana mumwe nomumwe kune kurumbidzwa kunobva kumudzidzisi uye vanozviisa ivo vari pasi pekunetseka zvakadaro. Kurudzirai mwana wenyu kuti abatsire nebasa ravo rechikoro, asi vagamuchire kana vakaramba rubatsiro rwenyu.
Uyewo zvinokosha: kana mwana wako achiita zvikanganiso, usavagadzirisa. Kana zvisina kudaro, vadzidzisi vacharamba vachifunga zvisina kukodzera hutano hwemwana wenyu, uye zvigumisiro zvichange zvichishungurudza pamatambudziko ekutanga.
Kana ukacherechedza kuti mwana wako akaremerwa, tarisa kukurukura nekirasi mudzidzisi. Vatengesi vekutanga havafaniri kupedza zvinopfuura 30 kumaminitsi e40 pamabasa avo epamba.
Zvipo pakuzvarwa kwechecheche
Utano hwakanaka hwekudya zvekudya zvegoroke uye chikoro | chikafu
makara Nessie kubva Loch Ness
Renovate kubva muimba yekupona
Sei tichiwana nyota kubva munzvimbo? vana mubvunzo
Kuchengetwa kwevana - kutarisira vhudzi kubva kumwana
Kutarisirwa kwevana - chiso checheche
Nzira yekuwana chikwereti chakanaka
Shingairira chipo Mudzidzisi mu kindergarten